कार्यमूलक अनुसन्धान २०७८ : नेपाली विषयमा सिकाइ स्तर बढाउने नवीनतम तरिका | साहित्यपोस्ट
अहिलेको युगमा लामालामा व्याख्यान दिएर विद्यार्थीहरूको कलिलो, कमलो एवम् संवेदनशील मनस्थितिलाई मुठार्नु हुँदैन । केवल सिक्ने र सिकाउने वातावरण मिलाई दिनुपर्छ । सिकारुले मार्ग भुल्दा मार्गनिर्देश गर्नुपर्छ । आवश्यक परेको ठाउँमा आवश्यकमात्रामा मात्र पृष्ठपोषण दिनुपर्छ ।
नन्दलाल आचार्य	 प्रकाशित ८ असार २०७९ १४:०१
शैक्षिक सामग्रीको सवालमा पनि ‘अड्को पड्को तेलको धूप’ नै गर्नुपरेको छ । कक्षामा कालो/सेतोे पाटीका अतिरिक्त कतै कतै पुराना, धुलाम्मे चार्ट/कागज टाँसेको सम्म देख्न पाइन्छन् । तिनीहरूको प्रयोजन र त्यहाँ रहनुको औचित्य बारे प्रायः कसैले वास्ता गरिरहेका हुँदैनन् ।
यस शैक्षिक सत्र २०७८को आधा समय कोरोनाको त्रासमा वित्यो । विद्यालय खुलेको दिन पनि विद्यार्थी÷शिक्षक भययुक्त मनोदशामा हुनाले अध्ययनअध्यापन कार्य अवरुद्ध भयो । शिक्षकहरूले सिकाउँछु भन्दा पनि सम्भव भएन । विद्यार्थीले पनि मरिहत्ते गरेर पढ्ने मौका पाएनन् । जसले जसरी जोतिए पनि शतप्रतिशत सिकाइ भएन । विद्यार्थीहरूको रुचि र चाहनाको वास्ता गर्ने चाहना हुँदाहुँदै पनि हतार भयो । सरासर किताबका पाठहरू सिद्धयाउन पट्टी लागियो । समय अभावका कारण परीक्षामुखी शिक्षण गर्न पर्यो । फलतः प्रतिफल ऋणात्मक पाउने अवस्था आयो ।
साँच्चै शिक्षकले अलिक खुल्ला दिमागले सोचेर थोरै मात्र कष्ट गर्ने हो भने विद्यार्थीहरूकै सक्रियतामा कक्षा–कोठामा अनेकौं रोचक शैक्षिक सामग्री जुटाउन र त्यस अनुरूपका गतिविधि सञ्चालन गरी शिक्षण सिकाइ कार्यकलाप गर्न सम्भव हुँदो रहेछ । शैक्षिक स्तर माथि उकासिसकेका सिमित विद्याथीहरूको सहयोगले पूरै कक्षाका शैक्षणिक कार्यकलापलाई छोटो समयमै फलदायी नतिजा हात पार्न सकिँदो रहेछ ।
यसका लागि पस्नासाथ विद्यार्थीहरूले सिक्ने वातावरण भएको कक्षाकोठा हुनुपर्छ । उनीहरू शिक्षकको व्याख्यानभन्दा आफ्नो अनुभव र क्रियाकलापबाट बढी सिक्छन् । उनीहरूले सिक्नुपर्ने कुराहरूलाई कथा, कहानी, खेल, चित्र, तालिका आदिका माध्यमबाट सम्प्रेषित गरिदिएमा/गर्न लगाइदिएमा सरल र सहज ढङ्गबाट चाँडै सिक्छन् । यसो गरेमा उनीहरूमा रचनात्मक–सिर्जनात्मक क्षमताकोे विकास हुन्छ र अपेक्षित सिकाइ उपलब्धि हाँसिल गर्न सकिन्छ । विद्यार्थी स्वयम्को लय र भाका पक्रन सके मात्र फलदायी सिकाइ सम्भव हुन्छ । अझ विद्यार्थीहरू नै सिक्ने र सिकाउने कार्यमा सक्रिय भए भने चाँडै गन्तव्यमा पुग्न सकिने रहेछ ।
यत्तिञ्जेल मैले शिक्षण क्षेत्रमा गरेको प्रयोग अनुसन्धानले व्याख्यान/भाषण विधिबाट ५ प्रतिशत, विद्यार्थीलाई स्वयम् पढ्न प्रेरित गर्दा १० प्रतिशत, श्रव्य–दृश्य सामग्रीको माध्यमबाट ३०–५० प्रतिशत, प्रदर्शन/छलफलबाट ५० प्रतिशत, अभिनय÷प्रयोगात्मक विधिबाट ७५ प्रतिशत मात्रै सिकाइ सम्भव भएको निष्कर्ष निकाल्यो । विद्यार्थी स्वयम्लाई शिक्षणकर्ममा सरिक गराउँदा ९० प्रतिशतसम्म सिकाइ सम्भव भएको थियो । यहाँ त्यही प्रयोगको फेहरिस्त सटीक रूपमा प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरिएको छ ।
क. विद्यार्थीहरूमा नेपाली भाषा अध्ययनप्रति मोह जगाउनु,
ख. सिकारुहरूलाई शैक्षिक सामग्री निर्माणमा सक्रिय गराउनु,
ग. नेपाली भाषा सिकाइमा विद्यार्थीहरू नै बढी सक्रिय रहेर अपेक्षित सिकाइ उपलब्धि हाँसिल गर्नु ।
घ. विद्यार्थीलाई सक्रिय सिकाइ सरिक गराएर उच्च उपलब्धी आर्जनमा उत्प्रेरित गर्नु ।
ङ. हेरेर वा सुनेर भन्दा गरेर सिक्ने वातावरण निर्माण गर्नु ।
यस अध्ययनका लागि कक्षा ९ (प्राविधिक धार) का ४० जना विद्यार्थी रोजिएको थियो । शिक्षण अबधि शैक्षिक सत्र २०७८ रहेको थियो । त्यसमा सुरुआतका महिनामा पढाइ ढप्प प्रायः भयो । मैले समूहगतरूपमा विद्यार्थी परिचालन गरेर विद्यार्थीहरूलाई नै सिकाउने/पढाउने वातावरण निर्माण गरेँ । प्रत्यक्ष–परोक्ष विद्यार्थीहरूलाई पृष्ठपोषण दिएर मेरो नवीन शैक्षिक विधि–प्रविधि अनुरूप अध्ययन गर्न सल्लाह दिएर सबै शैक्षणिककर्मीहरूले सघाउनुभयो ।
शिक्षणमा विद्यार्थी सक्रिय विधि लागू गर्न मैले पाँच वटा समूह निर्माण गरेँ –
यी प्रत्येक समूहले तोकिएको दिनमा तोकिएको पाठ अरू विद्यार्थी सहपाठीहरूलाई सिकाउथेँ । छलफल, प्रदर्शन, अभिनय, प्रयोगात्मक विधि बढता र ब्याख्यान विधि कम प्रयोग गर्थे । म कक्षाको सुरुआतमा सबैलाई नियम सम्झाएर पुनर्ताजगी गर्थेँ । पाठ्य विषयवस्तुको सटीक चर्चा गर्थेँ । तोकिएको समूहलाई सिकाइ नेतृत्व लिन र बाँकी विद्यार्थीलाई सक्रिय सिकाइमा सहभागी हुन उत्प्रेरित गर्थेँ । सुरुको हप्तामा मेरो उत्प्रेरणाले उत्ति साह्रो काम गरेन । अर्को हप्तादेखि भने क्रमशः उपलब्धि हात पर्दै गयो र फलदायी उपलब्धी हात पर्दै गयो ।
४. अपनाइएका शैक्षिक कार्यकलापहरू
पहिलो चरण– विद्यार्थीबाटै विद्यार्थी सिकाइका लागि सर्वप्रथम मैले विद्यार्थीहरूको नेपाली भाषा सिकाइस्तर पत्ता लगाउने काम गरेँ । विद्यार्थीहरूको व्याकरणिक/भाषिक रूचि र क्षमता पहिचान गरेँ । समस्या कोरोनाकालको प्रतिकूल समय मात्रै नभईकन सिकाहरूकै बेहोसीपनमा रहेको निष्कर्ष निकालेँ । समग्रमा भन्नुपर्दा विद्यार्थीहरूले हाउगुजी मानेर आएको नेपाली/व्याकरणका कमजोरीहरू र त्यसलाई हटाउने सम्भावित उपायहरूको निक्र्यौल गरेँ । र, उपलब्धिमूलक सिकाइमा हरतरहले अग्रसर हुने र विद्यार्थीहरूलाई हुन लगाउने अठोट गरेँ । यसका लागि विद्यार्थी स्वयम्लाई शिक्षणकर्ममा सरिक विधि अबलम्बन गर्ने वताएँ । नीतिनियम बुझाएँ । टोली/समूह प्रमुखको सक्रियता बढाएँ ।
हरेक आइतबार समूह ‘क’ ले क्रमशः पाठ १, २, ३ र ४ मा भएका पाठ्यवस्तु शिक्षण गर्नुका साथै कक्षा कार्य/गृहकार्य निरीक्षण गर्नुपथ्र्यो । यसमा संविधा यादवको नेतृत्वमा दिपक कुमार राम, पंकज यादव, नवीन साह, निरज यादव, सुनिल राम, रुपचन लामा सक्रिय थिए ।
हरेक मंगलबार समूह ‘ग’ ले अनिषा महतोको नेतृत्वमा अन्य सदस्य खुशी साह, निश्चल शर्मा, कृष्ण साह, विवेक कुमार सिह, जागेन्द्र सिह, निपेश ठाकुरलाई साथमा लिई पाठ ८, ९ र १० का पाठ्यवस्तु बारे कक्षामा कार्यकलाप गर्यो ।
नन्दलाल आचार्य	 ७ असार २०७९ ००:०१
नन्दलाल आचार्य	 २० फाल्गुन २०७८ ०७:०१
नन्दलाल आचार्य	 ११ माघ २०७८ ०८:०१
नन्दलाल आचार्य	 २७ पुष २०७८ ०८:०१
५. सुधार, परिणाम र सिकाइ स्तर
अलिकती ध्यान दिन सके नेपाली/व्याकरण शिक्षणको सजिलो छ । अधिकांशले प्रयोग व्यवहार गर्दै आएको र लामो ऐतिहासिक परम्परा भएको लोकप्रिय भाषा नेपाली भएकोले यसको व्याकरण जान्नु सबैको हितमा छ भन्ने वुझाउन खोजेँ ।
नोकरीमा सामेल हुँदा वा निजी जीवन व्यतित गर्दा समेत कामकाजमा उतिकै प्रयोगमा आउने भाषा भएकाले यसको व्याकरणिक ज्ञान जीवनका हरघडीमा काम लाग्ने जानकारी दिलाएँ । यसलाई नकार्ने नेपाली व्यावहारिक जीवनमा पछाडि पर्छ । नेपाली भाषामा राम्रो दखल भएको व्यक्ति जहिल्यै पनि अघि हुन्छ । तसर्थ हरेक नेपालीले नेपाली भाषालाई सम्मान दिन सक्नुपर्छ । वेवास्था गरे प्राप्त सम्मान पनि भाषिक कमजोरीले गर्दा गुम्दै जान्छ । यस्ता कुरा बोध गराएँ ।
अहिलेको युगमा लामालामा व्याख्यान दिएर विद्यार्थीहरूको कलिलो, कमलो एवम् संवेदनशील मनस्थितिलाई मुठार्नु हुँदैन । केवल सिक्ने र सिकाउने वातावरण मिलाई दिनुपर्छ । सिकारुले मार्ग भुल्दा मार्गनिर्देश गर्नुपर्छ । आवश्यक परेको ठाउँमा आवश्यकमात्रामा मात्र पृष्ठपोषण दिनुपर्छ । आजका विज्ञान र प्रविधिले युक्त विद्यार्थीहरूले शिक्षकको मायालु व्यवहार र समुचित मार्गनिर्देश पाउन सके शिक्षकले कक्षाकोठामा प्रवचन दिइराख्नुपर्दैन । अझ नेपाली÷व्याकरण त प्रयोगात्मक तवरले मात्र सिक्न र सिकाउन सकिन्छ ।
कोरोनाकालको सन्त्रासमय समयको शिक्षण सुधारमा गरेको सानो प्रयत्न समेटेर प्रस्तुत गरिएको यस प्रतिवेदन विद्यालयका अन्य शिक्षकसामु समेत प्रस्तुत गरेर प्रवोधिकरण गरिने छ । यस प्रयोगका सकारात्मक पक्षहरू अपनाउन र नकार पक्षहरूका लागि सुझाव दिन म सरोकारवाला शिक्षक वर्गमा अनुरोध गर्दछु । यथोचित सुझावलाई मध्यनजर राख्तै आगामी दिनमा शैक्षिक कार्यकलापमा सुधार गर्ने प्रणका साथ यस प्रतिवेदनलाई बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु ।
यस प्रतिवेदनका सकारात्मक कुरा अपनाउन र त्रुटि/कमजोरी औल्याई सुझाव दिन प्र.अ. भरत प्रसाद साह, स.प्र.अ. वीरेन्द्र कुमार यादव, शिक्षकहरू– बाबुनाथ यादव, गौरीशंकर सिंह, भैरव प्रसाद गेलाल, चन्देश्वर यादव, सुनिल यादव, मञ्जु कुमारी, राजन कुमार गोइत, रामचन्द्र साह, पंकज यादव, सरोज कुमार सिंह दनुवार, राजकुमार साह, नन्दलाल आचार्य, राम बहादुर साह, रविन्द्र कुमार यादव, बिजेन्द्र श्रेष्ठ, सत्यनारायण महतो, संगिता साह, सरोज कुमार यादव, जयगोविन्द साह, जनक साह, चन्देश्वर यादव, बलराम यादव, शशिकुमार साह, शुशिला श्रेष्ठ, रामेश्वर साह, तुलसा कुमारी काफ्ले, नरेश कुमार पाल, सूर्यनायायण शर्मा, अन्तराम यादव, रिङ्कु यादव, गौरी यादव, विमला कुमारी झा, रामसेवक राउत, लोचन साह, सुमित्रा योञ्जन, गीता कुमारी साह, सूर्यनारायण ठाकुर, रन्जित कुमार साह, रामेश्वर साह, मदन साह, मीना कुमारी कार्की, दीपकला कार्की, सम्झना कुमारी यादव, बेचु साह, हरिकिशोर कामती समझ सादर अनुरोध गर्दछु ।
कार्यरत् संस्था – श्री जनता मावि, गोलबजार–४, सिरहा ।
सम्पर्क : ९८४२८२९२०६/nandalalacharya@gmail.com
८ असार २०७९ १४:०१
कथा - नसोध है गरिमा !
नन्दलाल आचार्यनेपाली विषय